China esoro igwe anaghị agba nchara Shot factory na-emepụta | Feng Erda
A na-eji SUS200, 300, 400 usoro igwe anaghị agba nchara agbaji wee mee ka bọọlụ dị iche iche. Igwe anaghị agba nchara nwere ezigbo okpomọkụ na-eguzogide, corrosion resistance, kenkowaputa surface.It nwere ike zuru okè mmetụta na igwe anaghị agba nchara workpieces, yi mgbatị na ngwaahịa nke chọrọ elu elu quality.size sitere na site 0.20mm na 2.50mm.
Kenkowaputa rustless elu, gburugburu bead udi
Ọnọdụ akụ na ụba maka iji waya anaghị agba nchara na peening na arụmọrụ nhicha na-adị mfe ịme. Bee waya anaghị agbaji ma ọ bụ gbarie n'oge eji n'ihi na ọ bụ mpempe akwụkwọ siri ike. N'ihi ya, ị ga-enweta uru ndị a:
300 usoro igwe anaghị agba nchara ogbugba ọgbụgba ọkụ dị nnọọ irè maka ọgwụgwọ elu nke nkedo aluminom, yana igwe nkenke, karia ndi turbochargers.
200 na 400 usoro igwe anaghị agba nchara na-akwadebe aluminom maka agba mwepụ na aluminom anwụ oge ọgbụgba maka deflashing na gụchara.
Nke gara aga: Zinc shot / Zinc ịkpụ waya shot
Osote: Barium-Silicon (BaSi)